China 450w Monocrystalline Bifacial Solar ထုတ်လုပ်သူများနှင့် တင်သွင်းသူများ - Rixing Electronics
450w Monocrystalline Bifacial Solar High efficiency Waterproof 25 နှစ်အာမခံ TUV CQC UL၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆိုလာပြားအတွက် 15 နှစ်၊ ဥရောပနှင့် တောင်အမေရိက စျေးကွက်အများစုကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ်တွင် သင်၏ ရေရှည်လက်တွဲဖော်ဖြစ်လာရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းကို ထုတ်လုပ်ရန် အခိုင်အမာတောင်းဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းထုတ်ကုန်များ, ငါတို့သည်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကိုထောက်ခံပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုလာပြားများသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ပျံ့နှံ့နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
စိတ်ကြိုက်လက်ကားဝယ်ယူရန်ကြိုဆိုပါသည်။450w Monocrystalline Bifacial နေရောင်ခြည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှ နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းချမှု၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အဆင့်မြင့်၊ လျှော့စျေးနှင့် အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်ရန် ကြိုဆိုပါသည်။450w Monocrystalline Bifacial နေရောင်ခြည်. ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ လျှော့စျေး ထုတ်ကုန်ကို ဝယ်ယူရန် စိတ်ချယုံကြည်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်၊ ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ယခုပင် တိုင်ပင်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အချိန်မီ အကြောင်းပြန်ပေးပါမည်။
1.Bifacial နည်းပညာသည် နောက်ဘက်ခြမ်းမှ စွမ်းအင်ကို 30% ï¼‰အထိ ထုတ်ယူနိုင်သည်
2.Backsheet နှင့် junction box သည် 1500V စနစ်အား ပံ့ပိုးပေးသည်။
5BB သည် module အတွင်းဘက်ထရီ၏လက်ရှိအပူဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချပေးသည်၊ လှပသောအသွင်အပြင်၊ အမိုးတပ်ဆင်မှုအတွက်ပိုမိုသင့်လျော်သည်။
လက်မှတ်- TUV၊ CE၊ ETL၊ INMETRO၊ KS၊ COC၊ Saber
QJM425-144HDG QJM430-144HDG QJM435-144HDG QJM440-144HDG QJM445-144HDG QJM450-144HDG
ပါဝါအထွက် Pmax Wp 425 430 435 440 445 450
Pmax တွင် ဗို့အား V mpp V 40.9 40.96 41.05 41.13 41.25 41.3
Pmax တွင် လက်ရှိ စစပါခင်ဗျာ။ V 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9
အဖွင့်-ဆားကစ်ဗို့အား Voc A 49.2 49.3 49.4 49.5 49.6 49.7
တိုတောင်းသောလျှပ်စီးကြောင်း Isc A 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5
Module E ciency Eff % 18.94 19.17 19.39 19.62 19.84 20.06
2. အနည်းဆုံး နှစ် 30 ထုတ်ကုန်သက်တမ်းï¼Œ 10% ~ 30% သမားရိုးကျ module နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနောက်ထပ်ပါဝါရရှိမှု
3. လုပ်ငန်းအခြေအနေများအောက်တွင် ပိုမိုမြင့်မားသော ပါဝါထုတ်ပေးခြင်း၊ ပျံ့နှံ့နေသော အဆက်အသွယ်ဆဲလ်နည်းပညာကြောင့်။
4. ကျယ်ပြန့်သော ရောင်စဉ်တန်း တုံ့ပြန်မှု၊ မီးခိုးမြူ သို့မဟုတ် တိမ်ထူသောနေ့များကဲ့သို့ အလင်းရောင်နည်းပါးသော ဆက်တင်များအောက်တွင် ပါဝါပိုမိုထွက်ရှိခြင်း။
450w Monocrystalline Bifacial နေရောင်ခြည် ကို အိမ်ခေါင်မိုးပေါ် ၊ ခြံ ၊ စီးပွားရေး အဆောက်အဦး ၊ ဆေးရုံ ၊ ကျောင်း ၊ စက်ရုံ...
450w Monocrystalline Bifacial နေရောင်ခြည် တွင် ဤအင်္ဂါရပ်များ ရှိသည်။
အပြည့်အဝ အလိုအလျောက်စနစ်နှင့် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ နည်းပညာ
BIPV၊ ဒေါင်လိုက်တပ်ဆင်မှု၊ နှင်းလွင်ပြင်၊ စိုစွတ်သောဧရိယာ၊ လေပြင်းနှင့် ဖုန်ထူသောနေရာ
ကျွန်ုပ်တို့၏ 450w Monocrystalline Bifacial နေရောင်ခြည် ၏ လက်မှတ်။
hot Tags:: 450w Monocrystalline Bifacial ဆိုလာ၊ လက်လီ၊ ဝယ်၊ စိတ်ကြိုက်၊ အစုလိုက်၊ ရောင်းအားကောင်း၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ စျေးနှုန်းသက်သာ၊ အသစ်ဆုံး၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိရောက်မှု၊ သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်၊ Off Grid၊ On Grid၊ TUV၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ စတော့တွင်၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ တရုတ်နိုင်ငံထုတ်၊ စျေးနှုန်းစာရင်း၊ CE၊ 25 နှစ်အာမခံ